လိမ္မော်ရောင် - ကယ်လိုရီ
အဲသည်ကျန်းမာသီးသောအသီး - လူတိုင်းလိမ္မော်ရောင်သိတယ်။ ရဲ့ကသူနေရာလေးကိုအတွက်လာနိုငျသောအရာကိုကြည့်ကြရအောင်။
လိမ္မော်သီး - ထိုသို့သောကယ်လစီယမ်, အဖြစ်သတ္တုဓာတ်ကြွယ်ဝအရင်းအမြစ် သံ , ဆိုဒီယမ်, ကြေးနီ, phosphorus ကို, ပိုတက်စီယမ်, မဂ္ဂနီဆီယမ်နဲ့ဆာလဖာ။ လိမ္မော်ရောင်၏စွမ်းအင်တန်ဖိုးကို - 100 ဂရမ်နှုန်း 47 ကယ်လိုရီ။ ဤသည်စွမ်းအင်ကိုအလွယ်တကူခန္ဓာကိုယ်ကစုပ်ယူသော fructose ၏ပုံစံအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ လိမ္မော်ရည်မြင့်မားနာမကျန်းထံမှအားနည်းသို့မဟုတ်ပြင်းထန်စွာသင့်ရဲ့အစားအစာကန့်သတ်ရန်သူတွေကိုရန်အကြံပြုသည်။
အလွန်ကြီးစွာသောစိတျဝငျစား, နံနက် start တစ်ခုသို့မဟုတ်ရှည်လျားသော, ပင်ပန်းတယ်နေ့ကအဆုံးသတ်နိုင်သည့် - ဆို form မှာလိမ္မော်ရောင်။ ဤသည်အသီးအခြား Citrus အသီးအပွကဲ့သို့ဗီတာမင် C နီးပါးလုံးဝပါဝင်ပါသည်, ဒါပေမယ့်ဗီတာမင် A နှင့် B တွင်အတွက်သူတို့ကအားလုံးတစ်ပြောင်ပြောင်တောက်သောစိတ်ဓါတ်များ, ကျန်းမာအရေပြား, လက်သည်းများနှင့်ဆံပင်, ဦးနှောက်စွမ်းဆောင်ရည်များနှင့်စည်းကမ်း၏အလုံးစုံအဓိပ္ပာယ်အပေါ်အတူတကွအလုပ်လုပ်နေကြသည်ကိုလည်းကြွယ်ဝနေသည်။ အဆိုပါကယ်လိုရီလိမ္မော်ရောင်သည်အလွန်နိမ်သော်လည်းဤရွေ့ကား,, အရိုး, အံအားကောင်းမပါဝင်ပါ!
လိမ္မော်ရောင်၏အာဟာရတန်ဖိုးကကြီးမြတ်စာခြေ၏ပြန်လည်နာလန်ထူမှုအတွက်ကိရိယာတခု, တိုက်ခိုက်ရေးချုပ်, အူသိမ်အူမမှန်, ပါးစပ်တွင်းကျန်းမာရေးဂရုစိုက်ရန်, နှလုံးစေသည်။
လိမ္မော်သီးကိုမကြာခဏအသက်ရှူနှာရည်ယို, ချောင်းဆိုး, တုပ်ကွေးရောဂါနှင့်အတူပြဿနာများရှိသည်သောလူများ၏အစားအစာတွင်ထည့်သွင်းရပါမည်။
ပင်အူရောင်ငန်းဖျားဖျားနာခြင်းနှင့်တီဘီဗီတာမင်၏ဤအစွမ်းထက်တာဝန်ခံမဆီးတားနိုင်လိမ္မော်သီးတက်ကြွစွာအဖျားများအတွက်ကုထုံးအစားအစာများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟုအတည်ပြုထားတဲ့မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကိုသက်သေအထောက်အထားများ, ဝက်သက်, ရှိပါသည်။
လိမ္မော်ရောင်သွေးထဲမှာသကြားဓာတ်ပမာဏကိုလျော့ကျစေပါတယ်ရာ fibrous တစ်ရှူး၏ကြီးမားသောပမာဏ, ပါဝင်သည်။ ဒီအမျိုးအစားဆီးချိုရောဂါနှင့်အတူလူများအတွက်အသုံးဝင်သည်။
အမျိုးအစား II ကိုဆီးချိုရောဂါရှိသူများ, လိမ္မော်သီးဟာသွေးထဲမှာသွေးသကြားဓာတ်အဆင့်ဆင့်, lipids နှင့်အင်ဆူလင်တည်ငြိမ်။
ဤ "အလှတရားအသီး" (အဘယ်သူမျှမတည့်တုံ့ပြန်မှု) အလွန်အသုံးဝင်နှင့်ပြဿနာအရေပြား, ဝက်ခြံ, ဝက်ခြံရှိသူများဖြစ်ကြသည်။ တစ်ခုမှာလိမ္မော်ရောင်အရွယ်အစားနှင့်အလေးချိန်ပေါ် မူတည်. 42 86 မှကယ်လိုရီကနေပါရှိသည်။ ဒါကြောင့်ကိန်းဂဏန်းသူပဲခြိမ်းခြောက်သည်မဟုတ်။ သို့သော်ဆရာဝန်များကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြည့်ညှင်းစောင့်အစားအသောက်များတွင်မျှမျှတတခဲ့ကြောင်းဂရုစိုက်ရန်အကြံပြုပါသည်။
လိမ္မော်ရောင်၏အသစ်ရှာဖွေတွေ့ရှိဂုဏ်သတ္တိများတစ်ခုမှာ - ကဇီဝတက်ကြွစွာဒြပ်ပေါင်းများ naringenin ပါရှိသည်။ ဤသည်ဓါတ်တိုးကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကခိုင်မာစေနှင့်မဆိုရောင်ရမ်းဖြစ်စဉ်များတိုက်မသာ။ ဒါဟာအစမှာ "တိုက်လေယာဉ်အခမဲ့အစွန်းရောက်ဆန့်ကျင်" နံပါတ်တစ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
တွန့်ဖို့အရေပြားညှိုးနွမ်းခြင်းမှ - ဤ neutralizing သက်ရောက်မှုအိုမင်း၌ရှိသမျှသောနိမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုစစ်တိုက်ခြင်းငှါကူညီပေးသည်။ စိတ်ပျက်ဖွယ်အများအပြားအချက်များရှိပါသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကား, မိမိလူငယ်၏ဘုန်း၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုဤမျှလောက်ပိုပြီးဖြစ်လာ - လိမ္မော်ရောင်၏ပုံမှန်အသုံးပြုမှုနှင့်အတူ gloss နှင့်တောက်ပသောအသားအရေ, သင်တန်း, ထောက်ပံ့ပေးကြသည်မဟုတ်။
လူကြိုက်များယုံကြည်ချက်ဆန့်ကျင်, လိမ္မော်သီးအခွံဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဆိပ်အပြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ အတော်များများကစားဖိုမှူးနဲ့ချက်ပြုတ်ရေးကကိုအလွန်လာကြတယ်၏အရသာကိုတိုးတက်ကြောင်းကိုငါသိ၏။ ယင်းအခွံထဲမှာအာဟာရကြီးမားတဲ့ငွေပမာဏပါရှိသည်။ အမိန့်အပေါ်ခွံထဲမှာအမျှင်ဓာတ်ပါဝင်မှုကိုသီးသောအသီးများဖိုက်ဘာအကြောင်းအရာကိုကျော်လွန်နေပါသည်။ အလွန်အားကောင်းတဲ့ Anti-inflammatory အကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိသည်နှင့်နှလုံးကြွက်သားအားကောင်းလာစေရန်ကြောင်းထို့ပြင်အပြည့်အဝခွံ flavonoids ။
လိမ္မော်ရောင်အခွံပါရှိသည် ဗီတာမင်တစ်ဦးက , C, B6 ဟာနှင့်ခ 5, ကယ်လစီယမ်, riboflavin, thiamine, niacin နှင့်ဖောလစ်အက်ဆစ်။
လိမ္မော်ရောင်အခွံနီးပါးချိုမြိန်ခြင်းနှင့်ဆက်ဆက်ပျော့ဖတ်ကဲ့သို့အရည်ရွှမ်းမဟုတ်ပါဘူး။ အရေပြားစိမ်သို့မဟုတ်စိုက်ပျိုးရေးဓာတုပစ္စည်းသယ်ဆောင်မပေးကြောင်းအဘယ်သူမျှမသေသေချာချာလည်းမရှိမှတပါးတချို့လူတွေကကြောင့်ခက်ခဲပင်ကုန်တယ် zest တွေဟာအစာကြေဖို့ရှာပါ။
မာအပြင်ဘက်အလွှာဖြတ်, အခွံသာအတွင်းပိုင်းစားရန် - ထိခိုက်မှု minimize လုပ်ဖို့တလမ်းတည်း။ core - အရေပြားနှင့်အသီးတို့အကြားလိမ္မော်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု - အက်ဆစ်သို့မဟုတ်ခါးသီးပေမယ့်အများဆုံးချိုမြိန်ခြင်းနှင့်အရသာလိမ္မော်ရောင်အဖြစ်အမှန်တကယ်အဖြစ်အသုံးဝင်သောနိုင်ပါတယ်။
ဆန့် - ကကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်က၎င်း၏အသုံးပြုမှုဖြစ်ပါတယ်ဘာလဲ?
မုယောစပါးဂျုံယာဂု - အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်ပျက်ဆီး
တစ်လကိုယ်အလေးချိန် menu ကိုများအတွက်အာဟာရ
စတော်ဘယ်ရီ - အသုံးဝင်သောဂုဏ်သတ္တိများ
Jillian Michael - အဘယ်သူမျှမပြဿနာဒေသများ
Pollock - အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်ပျက်ဆီး
Bovine ကြက်ဥ - အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်ပျက်ဆီး
Ampoules အတွက် Dexamethasone - မူးယစ်ဆေးဝါး၏အင်္ဂါရပ်အားလုံး
Larimar ကျောက်ခေတ် - မှော်ဂုဏ်သတ္တိများ
Crocosmia - စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့်စောင့်ရှောက်မှု
Megan Fox ကရဲ့ခင်ပွန်းကယ့်သမီး, မင်းသမီးနှင့်သူ၏ကောင်းသောဗီဇကကျေးဇူးတင်လိုလား ...
သြသဒေါက်ပုတီး - ဘယ်လိုသုံးစွဲဖို့?
မီးဖိုချောင်များအတွက် angle ပါးပျဉ်း
တစ်ဦး flounder သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ဘယ်အစားအစာ tryptophan ဆံ့?